Ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi ukuphila kuba yisicefe futhi abavamile, impilo iqala ingcindezi zonke izinhlangothi. Ngakho-ke kuyadingeka ngezinye izikhathi ukuba azihlelele yena ukuphumula kancane. Siyabonga kumngane bakhe abathembekile, awukwazi kuphela bazijabulise, kodwa futhi ukuba nivuthulule uthuli zokuphila kwansuku zonke. Kungaba funny kakhulu uma beveza umdlalo phezu iqembu bachelorette kufana abangani bakho futhi wenze kusihlwa fun ngisho nangokwengeziwe.
Ngokukhethekile ubambe izixuku, akunakwenzeka kukhona zalelo nani elikhulu abangane abaseduze kubalulekile ukubiza okunjalo kuze kube namuhla nakwa abantu. Ungesabi, ukuthi ngesikhathi inkampani iholide ngeke uchitha isikhathi esiningi namandla. Kudingeka Ungadla ngesimo sandwich noma canapés, kanye notshwala nje. Kukhethwa utshwala - engathí zomuntu siqu, uma ungadli - kuyintando yakho. A Umdlalo fun ku ephathini hen kuzodala Umkhathi fun, futhi usize wonke uphumule.
Kubalulekile ukucabanga mayelana isihloko kusihlwa. Lokhu kuwenza ube nobunye bonke abantu eza - ngisho noma abangane bakho abangalwazi nomunye, umgomo wabo ezivamile bashesha baba abangane. Ngokwesibonelo, ungakwazi ukuhlela party Pajama, ungase futhi uthole kanye nabangane bakhe ukupheka inkukhu, ukubukela ibhayisikobho entsha noma ukuhlela webanga-movie ubudala. Eqinisweni, imicabango nendlela ukuhlela iqembu bachelorette, okuningi, wena nje ukuxhuma fantasy.
ethandwa kakhulu ukuthi emaphathini nezintombi ngaphambi kosuku lomshado. Ngalolu suku, sibuthana bonke abangane nezihlobo bavuma likamakoti, bamphelezele ku "beshadile". Kulokhu, umdlalo phezu iqembu bachelorette ngokuvamile ulungisa i impelesi. Inkampani enjalo kubhekwa eyamukelekayo ukumema indoda, kodwa kuphela uma ingenayo ukubukwa umakoti esizayo.
Ukudala Umkhathi fun lomkhosi ukwazisa izivakashi isoka bachelorette ezinezihloko party, ukuze bakwazi ukuthola indlela zabo izipho bese ukhetha zokubhukuda. Akubalulekile ukuba izinkinga umsebenzi wabo, ucabange into elula ngesikhathi esifanayo ezithakazelisayo.
Imidlalo phezu iqembu bachelorette kufanele beveza ngesisekelo akuxhomekile ukuthi uzoba khona. Ngokwesibonelo, umdlalo "igama Funny." isimo sakhe ukuthi izivakashi kumele dream, njengoba kubukeka njengokuthile igama pair uma base befile bobabili ethandwa nabadumile, ungase futhi ngeso lengqondo lokho kwakuyodingeka baphile ndawonye.
Kukhona futhi imidlalo phezu iqembu bachelorette ngokuthi "khuluma iqiniso" futhi "umakoti". Nokho, ukuzijabulisa is best kwenziwa kusihlwa owanikhipha ndawonye nabangane abaseduze kakhulu, lapho kungaba khona ukungavumelani. Futhi ungakhohlwa ukuthi kubalulekile ukuba winner, futhi umklomelo kumele kuhlinzekwe.
Ngezinye izikhathi kukhona isifiso siphambuke yonke imithetho futhi nihlela bachelorette party okungavamile, silahle bonke ubandlululo. It is, isibonelo, kungaba uhambo phesheya, travel ngesikebhe, e ebusuku amaqembu nokunye okuningi. Ukuze afeze "ukuphila engenabantu" noma umane nje ukhombe ngophakathi nabangani kulempelasonto akudingeki sizame kakhulu, udinga nje ukuba umcabango kanye nesifiso ukuphumula.